सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा १ एक सय २२ वर्षयताकै गर्मी, तिन दिन तातो हावा चल्ने
धनगढी। तराईका जिल्लामा आगामी तीन दिन अत्यधिक गर्मी भई (हिट वेब) तातो हावा चल्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। वैशाख ५, ६ र ७ गते तराईमा लूको सम्भावना देखिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अभिलेखअनुसार देशका ७ स्थानमा वैशाख शुरु नहुँदै ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम पुगेको छ।
जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा हिट वेब ‘लू’ शुरु भइसकेकोले सबै नागरिकहरुले सचेत रहन आवश्यक रहेको बताए। उनले एक सय २२ वर्षपछि गत मार्चमा नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लामा अहिलेसम्मकै बढी तापक्रम रेकर्ड भएको बताए। वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेशनले पनि नेपालको पश्चिमी भागमा अत्याधिक तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांक निकालेकाले सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरे।
उनले भने ‘यो वर्षमा चैतको सुरुदेखि नै वा फागुनको अन्तिम हप्तादेखि नै तापक्रम बढेको अवस्था छ । वैशाखको ५ गतेदेखि फेरि लगातार तीन दिन पश्चिम तराईमा तापक्रम अत्यधिक वृद्धि हुँदैछ । त्यो तापक्रम ४० डिग्री वा त्योभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ । अब हिट वेब सुरु हुँदैछ भन्दा फरक नपर्ला । ४० डिग्री वा त्यो भन्दामाथि तापक्रम, दुई वा त्योभन्दा बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई लू अर्थात् हिट वेब ‘अत्यधिक गर्मी’ को अवस्था भनिन्छ । भारतले हिट वेबको सूचना पनि जारी गरिसकेको छ । चेतावनी दिइसकेको छ । हिजोसम्मको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नेपालको रेकर्ड हेर्दा तीन वटा स्टेशनमा ४० डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम रेकर्ड छ । ३५ देखि ४० डिग्री सेल्सियस भएको स्टेशनको सङ्ख्या २७ पुगेको छ ।’
जलवायुविज्ञ डा. उप्रेतीले अहिले औसत पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव १ डिग्री रहेको र भारतले जारी गरेको एक सय २२ वर्षको तथ्याङ्कमा १ दशमलव ८६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम औसतमा बढेको देखिएको बताए । उनले यो असर जलवायु परिवर्तनको कारण भएको बताए ।
जलवायुविज्ञ डा. उप्रेतीले अहिले चुनावी माहोल भएकोले बढ्दो तापक्रमको असरबाट बच्न चुनावी कार्यक्रमलाई थोरै समयमा सीमित गरेर जान सुझाव पनि दिए। उहाँले दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म तापक्रममा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकोले सहन गर्न गाह्रो हुने र त्यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मुटु रोगी र गर्भवती महिलालगायतकालाई बढी असर गर्ने बताए। अत्यधिक गर्मीका कारण मान्छे बेहोस हुने, शरीरको तापक्रमले पसिनाको मात्रा घट्न जाने जस्ता समस्या हुने भएकोले पानी बढी मात्रामा पिउन आवश्यक रहेको उहाँले बताए। लूबाट बच्नका लागि ठूलो कार्यक्रम, आमसभा, भेलाहरू बिहानको समयमा गर्ने वा तीन बजेभन्दा पछि गर्न उपयुक्त हुने, बालीनाली भित्र्याउँदा पनि घाममा धेरै समय काम नगरि बिहान र बेलुकाको समयमा गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै धेरै तापक्रम भएको दिनमा कतिपय देशमा ‘वर्क होलिडे’ दिने गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा तापक्रमको सीमा तोकेर त्यही किसिमका उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट बच्न पानी प्रशस्त पिउने, दही, मोही र झोलिलो पदार्थ खाने,प्रोटिन भएको खाना खाने, कटन र पातलो लुगा लगाउन उनको सुझाव छ ।